KDE 4.12 la heli karo | Laga soo bilaabo Linux
KDE 4.12 waa la heli karaa
Beesha ee KDE ayaa ku dhawaaqay cusbooneysiintii ugu dambeysay ee laanta 4.X ee deegaanka Desktop-ka caanka ah: KDE 4.12.
Qiyaastii 20 cilladaha cilladaha iyo waliba waxyaabo kaladuwan oo wanaagsan ayaa lagu sameeyay nidaamyo kala duwan, oo ay ku jiraan KNewStuff, KNotify4, maaraynta faylka iyo waxyaabo kale.
Codsiyada ay ka mid yihiin hagaajinta waxaa ka mid ah tifaftiraha qoraalka KATE, taas oo aad ku horumarin karto plugins-ka Python aad uga fudud.
Aqoon uu helay xoogaa kharribaad ah, oo hadda waxaa ku jira taageero maqal iyo muuqaal ah oo loogu talagalay epub, hagaajinta mashiinka raadinta, iyo hagaajinta kale.
Waa in la ogaadaa in Nepomuk ayaa heshay cilladaha cilladaha iyo awooda tusmeynta qaababka MS Office 97.
KWlletMaareeyaha, aaladda lagu keydiyo sirtaada, waxaad hadda ku keydin kartaa foomka GPG. Konsole soo bandhigaa muuqaal cusub: Ctrl + dhagsii si toos ah udaadi URL-yada soosaarka qalabka.
hoomboro waxay soo bandhigtay dhowr waxqabad oo lagu hagaajinayo kala soocida marka faylasha la soo bandhigayo, iyadoo la yareynayo isticmaalka xusuusta iyo in wax la dedejiyo.
Waxaas oo dhami waa in loo banneeyo tikniyoolajiyadda jiilka soo socda, oo loogu magac daray Qaab-dhismeedka KDE 5. Macluumaadkan waxaa lagu ballaarin karaa (Ingiriis) kan Ogeysiis rasmi ah.
Hadda waa inaan iska sugno inuu soo galo Arch 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » KDE 4.12 waa la heli karaa
Waxayba kujirtaa imtixaanka 😀
Haa haa !!!
Waxaan u maleynayaa in Debian uu sidoo kale ku yeelan doono dhabarka dambe ee KDE.
HAHAHAHA, waan jeclahay dhinacaaga togan.
taasi waa, fikirkaaga togan 😉
Hagaag, haddii ay jiraan wax aan la cusbooneysiin karin, baasaaboorka rasmiga ah ayaa la isticmaalaa. Waana ku mahadsan yihiin waxaan sii joogay Debian.
Debian waxay sifiican u cusbooneysiineysaa KDE Imtixaanka!, 4.13 waxay ahayd kaliya maalmo kooban.
Laakiin waa su’aal? maya iyo in 4.11 uu noqonayo kii ugu dambeeyay ee Kde 4 ??? oO
Waxaan u maleynayaa in 4.12 uu noqon lahaa u guuritaanka Qt5. Laakiin sida oo kale xasiloonida ugu dambeysa waa inay noqotaa 4.11.4. Waxaan qabaa
Si aad u cusbooneysiiso! = D
Weli ma cusbooneysiin 4.11.4 .. Hore ayaan u sugayaa 4.12 😀
Waxaan ka sameeyay web Html ku saleysan FromLinux: http://desdefedora.tumblr.com/ =D
Kawaran haddii @elav uu ku gubo oo uu kugu tuuro wabiga si aad uhesho magac iyo dabool?
Ha u qaadin si dhab ah haha, ma furi doono buugaag xayeysiisa DesdeLinux, waxaan u sameeyay kaliya websaydhka haha ​​raaxada ...
Hagaag, nasiib wacan. Hadaad ag marto Pastering! Taringa!, Waxaan u maleynayaa inaad waxyaabo badan oo beeninta ah aad hayso. Pastebin iyo / ama Duufaan Dufan ayaa ka wanaagsan Taringa!
Taringa ... Boggaas waxaa ka buuxa macno darro, macluumaad aad u yar oo faa'iido leh ...
Hahaha, haa, dhalo qurxoon 😀
KaOS ahaan waxaan horeyba ugu haysannay KDE 4.12 dib-u-dhiska dhismaha maalmo, dhab ahaantii waxaan haynaa tan iyo markii ugu horreysay betas.
Maanta waxaa loo diyaariyey dhammaan isticmaaleyaasha repo deggan http://kaosx.us/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=117
ma kuwa ka soo horjeedaa wakiilka 86?
Waa yaab! dijo
Waxaan la joogay KaOS dhowr maalmood. Distro ah 10 oo leh jawaab celin 10 sidaan ku iri golahaaga. Waxaan qiyaasayaa inay jiraan faa iidooyin aad u yar. Laakiin waxay i siinaysaa dareen weyn. Ma doonayo inaan dawannada ku tuuro duqsiga maxaa yeelay waxaan ku sameeyay Chakra ka dibna aad ayaan u niyad jabay.
Iyo dabcan, sida Yoyo tiri, waxay horeyba ulajirtaa kde 4.12 xarunteeda xasilloon tan iyo galabnimadii.
Iyo kde 4.12 waa 10 kale oo desktop ah. Kumaa ii sheegi lahaa inaan ahay gnome tan iyo maalmihii uu Suse CD-yada u diri jiray guriga
Ku jawaab Vaites!
Xiisaha aad u leedahay faallooyinkaaga, sidee Chakra kuu niyad jabisay?
Taasi KaOS waxay rabtaa inay burburiso wax kasta oo xD ah
waxay horeyba ugujirtaa furanSUSE 12.3 iyo 13.1 KR repos
Chakra waxay kujirtay wadahadalada in lagu sii wado v 4.11.4 ama la aado 4.12.0, waxay go aansadeen kan dambe waxayna diyaarinayaan oo tijaabinayaan iyadoo loo eegayo inta maalmood ee ay ku jiri doonto tijaabada repo.
"Waa in la ogaadaa in Nepomuk ay heshay ciladaha cilladaha iyo awooda tusmeynta qaababka MS Office 97"
Nacalad, krunnerku ma heli karo dukumiintiyada aniga 🙁
U orod nadiifiye nepomuk si aad u aragto inay taasi tahay sida ay adiga kuugu shaqayso
Ku jawaab jandarka
Waxaan u maleynayaa inaan sugi doono xoogaa maadaama aan aad iyo aad ugu faraxsanahay degenahayga 4.11.5.
Oo ii sheeg, sidee u aragtaa inaad haysato nooc KDE ah oo aan weli la sii deyn ama aan la sii deyn? 😀
La yaab iguma aha in Sabayon ay sidoo kale soo bixi doonto toddobaad ama laba toddobaad.
Wanaagsan Waa inaad hadda isku daydaa.
Qof cusbooneysiiyay miyuu ii sheegi karaa haddii sharraxaadda Okular hadda lagu arki karo akhristayaasha kale ee PDF?
Ku hagaaji rarka fiidiyowga YouTube-ka ee Chrome / Chromium / Superbird